Igumbi leGadi-ibhedi ka-Artha kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Igumbi leGadi-ibhedi ka-Artha kunye nesidlo sakusasa
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLeif & Marguerite
ULeif & Marguerite yi-Superhost
Eli gumbi lomgangatho wokuqala linebhedi ephindwe kabini kunye nomoya welizwe. Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo. Ulala abantu ababini. Iimbono ezintle ngasemva kwendlu kunye neenkuni. Umoya womoya kwigumbi.
Ukuzabalazela indawo esempilweni iitawuli zethu kunye namaphepha enziwe ngomqhaphu ophilayo kwaye yonke ipeyinti engeyiyo ye-VOC isetyenziswe kwikhaya lonke. Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo lixhotyiswe ngendlu yangasese ehamba kancinci kunye nentloko yeshawari ehamba kancinci. Yonwabela imveliso yendalo evela kwigadi yethu ngexesha lokuhlala kwakho. Yonwabela isidlo sakusasa esimnandi nesinempilo. Yiza nezithako zakho kwaye usebenzise ngokupheleleyo ikhitshi ukulungiselela isidlo sakho sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa.
Siyazingca ngokuba i-Artha B&B inikwe amandla yisola, zombini kumakhaya amanzi kunye neemfuno zokufudumeza kunye nokusetyenziswa kombane. Ikhaya lethu libe yinxalenye yoKhenketho lweSolar lwaMakhaya kwaye luqinisekisiwe njengendawo yokuhlala ye-Travel Green Wisconsin.
Ifumaneka ngaphandle kwelizwe. Indawo entle. Kukho iHartman's Creek State Park kunye neStanding Rocks County Park kufutshane, zombini zihamba intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokutyibiliza.
Umbuki zindwendwe ngu- Leif & Marguerite
Siza kubulisa iindwendwe zethu xa sifika kwaye sifumaneke ukuba siyafuneka.